Meclofenoxate (Centrophenoxine) (51-68-3) Ndị na-emepụta ihe - Phcoker
Meclofenoxate (Centrophenoxine), nke a na-ere n'okpuru aha aha Lucidril, bụ otu n'ime ndị mbụ na ndị a kacha mụọ studied
Meclofenoxate (Centrophenoxine) (51-68-3) vidiyo
Meclofenoxate (Centrophenoxine) ntụ ntụ Smmezi
Product Name Melofenoxate (Centrophenoxine) (51-68-3)
Chemical Aha Clophenoxate;
Klaasị ọgwụ ọjọọ Agụụ Anti-Allergic, Antineoplastic Agents, Antiparasitic Age
molekụla Fnhazi C12H16ClNO3
molekụla Wasatọ 257.71 g / mol
Nkịtị Monoisotopic 257.081871 g / mol
esi ebe 345.941 Celsius C na 760 mmHg
Ọkara Ndụ nke Ndụ 2-4 awa
Sume Nchịkwa mmiri: 2.9 mg / mL
Antinye Centrophenoxine ntụ ntụ ejirila ọgwụ ọgwụ nootropics na mgbakwunye nri.
Meclofenoxate (Centrophenoxine) nyocha
Meclofenoxate (Centrophenoxine), nke a na-ere n'okpuru aha akara ahụ Lucidril, bụ otu n'ime ndị nootropics mbụ na-amụkarị ma ọ bụ ọgwụ a na-akpọ "smart". Ọ bụ nootropic a maara nke ọma ma kwanyere ùgwù gosipụtara onwe ya kemgbe ihe karịrị afọ iri nke iji na nnwale nnwale.
Ebido na 1959 site n'aka ndị sayensị na French National Scientific Research Center dị ka ọgwụgwọ maka ọrịa Alzheimer, ọbara ezughị ezu na ụbụrụ, ‍ na afọ ojuju metụtara afọ, ọgwụ a ejirila ọtụtụ maka ịgwọ nsogbu ụbụrụ metụtara afọ, dị ka. ka Alzheimer na ọrịa dementia. Ndị mmadụ nwere ahụ ike na-ejikwa ya ike iji mee ka ebe nchekwa na ọgụgụ isi rụọ ọrụ ma meziwanye ahụike ụbụrụ.
Nchoputa gosiputara ogwu ogwu nke centrophenoxine dika ihe ncheta nke di ike na ihe ogwu.
Na Europe, enyere ya ọgwụ maka ịgwọ ọrịa na ncheta afọ, mana ọ dị na tebulu dịka mgbakwunye nri na US na Canada, ebe a na-ejikarị ya maka akụrụngwa na-eme ka ọgụgụ isi ya.
Gịnị bụ Meclofenoxate (Centrophenoxine)?
Ejirila Centrophenoxine dị ka ihe mgbakwunye maka nri maka ikike icheta ikike ya.
Centrophenoxine bụ kemịkal abụọ:
Dimethyl-aminoethanol (DMAE), nke bụ ihe anụ ahụ na-ahụ n'ụfọdụ nri (azụ, azụ) na obere ụbụrụ. Ọ bụ ebe a ga-esi choline ma nwee mmetụta na-akpali ụbụrụ.
Parachlorphenoxyacetic acid (pCPA), ụdị sịntetik nke homonụ na-eto uto a na-akpọ “auxins”.
DMAE bụ akụrụngwa kachasị arụ ọrụ na ọgwụ a. DMAE anaghị agafe ihe mgbochi ụbụrụ. Agbanyeghị, n'ime centrophenoxine, ọ nwere ike ịgafe ihe mgbochi ụbụrụ ọbara wee banye ụbụrụ nke ọma
Ozugbo etinye ya n'ahụ, akụkụ nke centrophenoxine na-agbaba gaa na DMAE na pCPA na imeju. A gbanwere DMAE ka choline, ebe centrophenoxine nke fọdụrụ na na-erugharị n'ahụ niile.
Meclofenoxate (Centrophenoxine) uru
Centrophenoxine nwere ike inyere aka ịlụ ọgụ kansa.
Centrophenoxine nwere ike inyere aka mgbaàmà nke dyskinesia na-egbu egbu.
Centrophenoxine na-akwalite ebe nchekwa na mmụta, ọ nwere ike melite ebe nchekwa na ndị ọrịa dementia.
Egosiwo Centrophenoxine iji mee ka mmepe, nchekwa na iweghachite ncheta dịkwuo mma. A na - eme ka nchekwa ebe nchekwa ka mma mgbe anyị nwere ọkwa acetylcholine dị elu. N'iburu n'uche eziokwu na Centrophenoxine na-eme ka mmemme cholinergic dị iche iche, otu n'ime ihe ndị a na-emepụta bụ choline, n'etiti phospholipids ndị ọzọ dị iche iche.
Ọrụ Ọrụ Mmalite Amalite Ego
Enwere ike iji Centrophenoxine dị ka pro Drug DMAE ma nke a dị ezigbo mkpa, n'ihi na mkpụrụ ndụ ihe a dị mma iji belata ihe ndị ọzọ na-emebi ihe n'ime ụbụrụ nke nwere ike ime ka mbelata ọrụ ọrụ ọgụgụ isi. Na ewepụrụ ụmụ irighiri ihe ndị a, ndị agadi nwere ike belata ịka nká ma dozie mmetụta ndị ịka nká nwere.
Centrophenoxine nwere ihe mgbochi mgbochi na akụrụngwa
Egosiwo Centrophenoxine ka ọ mee ka ọ dịkwuo elu rue oke ruru 50%.
Centrophenoxine na-emezi Mood na Mkpali, ọ nwere ike inye aka belata ụjọ.
Nnyocha ụmụ anụmanụ na-egosi na centrophenoxine nwere mmetụta mgbochi ụjọ nchegbu.‍
Centrophenoxine na - arụkarị ọrụ site na ịnapụta na ịkwalite ọrụ choline. Choline bụ ihe ga - eme acetylcholine, ihe dị mkpa na enweghị njedebe nke nwere njikọ chiri anya, plasticity na ebe nchekwa. Achọpụtabeghị etu centrophenoxine si dịkwuo elu nke choline na acetylcholine, mana a na-eche na ọ na-adabakarị na choline ma ọ bụ na-atụgharị na phospholipid dị n'etiti nke ejirizie mepụta acetylcholine. Agbanyeghị ụzọ, ọ bụ ike cholinergic na-eme ka centrophenoxine dị ike dị ike nootropic ikike nke aka ya.
Na mgbakwunye na nrụpụta nke acetylcholine mmepụta, a na-amata centrophenoxine dị ka ume ọrụ ike nke na-akpali ọrụ ụbụrụ n'ozuzu ya site na imeziwanye nnabata glucose ma na-abawanye uru oxygen. Site n'ime nke a, centrophenoxine na-eme ka ụbụrụ rụọ ọrụ nke ọma, si otú a na-emeziwanye nlebara anya, itinye uche na idozi echiche, na-ewepụ ihe a sị na ọ bụ ụbụrụ ụbụrụ. Dịka antioxidant nwere ike, ọ na-enyocha usoro enweghị ntụpọ, na-awụpụ nsí ma sonye na ndozi nke mkpụrụ ndụ mebiri emebi. N'ikpeazụ, ọ na-atụgharị ịka nkata site na ibelata ma ọ bụ wepụbe ihe na - eme ka ngwaahịa mmebi nke metabolic na - elele anya dị ka ihe "eyi na - adọwa adọwa."
Meclofenoxate (Centrophenoxine) mmetụta na nchekwa.
A na-ahụ Centrophenoxine dị ka ihe na-adịghị ize ndụ. Ejirila ya ihe dị ka afọ 50 na-enweghị mmerụ ahụ ọ bụla dị mkpa.
A na - ekwu na ọ bụ ọgwụ nwere ike ịnagide maka ọtụtụ ndị okenye nwere ahụike na ndị agadi na - ata ahụhụ site na ncheta.
Agbanyeghị, ụfọdụ ndị ọrụ enwetawo mmetụta dị nro na obere nsogbu, gụnyere ọgbụgbọ, isi ọwụwa, nsogbu eriri afọ, na enweghị ụra.‍
Achọghị Centrophenoxine maka ụmụ nwanyị dị ime n'ihi ọdịnaya DMAE.
Meclofenoxate (Centrophenoxine) ntụ ntụ ntụ
Centrophenoxine dị na counter na capsules nwere 200-300 mg nke ọ bụla. Ọnwụnwa nyochara ọgwụgwọ nke nwalere nsonaazụ centrophenoxine na ọrụ ọgụgụ isi ejirila ọgwụ kwa ụbọchị
1,200 mg na ndị agadi nwere ahụike na onunu ihe ruru 2,000 mg na ndị ọrịa dementia.
Centrophenoxine bụ ezigbo choline isi mmalite, ị nwere ike ịchọta ya n'ọtụtụ nootropic - ụfọdụ n'ime ndị a na-ahụkarị bụ Noopept na Racetams.
Centrophenoxine na Aniracetam Stack
Lee ihe atụ nke starophenoxine tojupụtara nke gụnyere aniracetam racetam na-ewu ewu iji kwalite njigide ncheta, ọnọdụ, okike, ma belata nchekasị.
1-2x kwa ụbọchị
Centrophenoxine na Noopept Stack
Lee ihe atụ nke starophenoxine stack na Noopept, tojupụtara a nwere ike imezi ebe nchekwa na mmụta, ebe ị na-enye akụrụngwa akwara ozi.
Na ọrụ nke intracellular physicochemistry na mkpụrụ ndụ ihe nketa maka ịkwa ụta n'oge ịka nká na mmetụta nke centrophenoxine. Ntụleghachi. Zs-Nagy I et al. Arch Gerontol Geriatr. (1989)
Cholinergic ọgwụ maka antipsychotic na-emetụta dyskinesia tardive. Tammenmaa-Aho I, Asher R, Soares-Weiser K, Bergman H. Cochrane Database Syst Rev. 2018 Mar 19
Ọrụ Cytotoxic nke ndị ọrụ alkylating na ọnụnọ nke centrophenoxine na ngwaahịa hydrolysis. Sladek NE. J Pharmacol Exp Ther. 1977 Mkpebi
Ike nke ọrụ antitumor nke cyclophosphamide site na centrophenoxine. Kanzawa F, Hoshi A, Tsuda S, Kuretani K. Gan. 1972 Ọgọst
Centrophenoxine: nsonaazụ na ụbụrụ mammalian ịka nká. Nandy K et al. J Am Geriatr Soc. (1978)
Ọdịiche dị iche iche nke meclofenoxate na ncheta ndị agadi. Marcer D et al. Agka Agadi. (1977)
Nootropics ntụ ntụ centrophenoxine (meclofenoxate) uru na oghere
Raw Noopept ntụ ntụ (157115-85-0)
Mpekpe 7P nke na-eme ka ụkọ nweta (1890208-58-8)